Apple iOS4vs. Google Android 2.2 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » Apple iOS4vs. Google Android 2.2
Posted by wailynnoo on Jun 8, 2010 in Computer & Cell Phone, Computers & Technology | 1 comment
Smartphone လုပ်ငန်းကို လက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Apple နဲ့ Google ကြားကပြိုင်ဆိုင်မှုဟာ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းထန်လာပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့လက Google က Android 2.2 ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ တနင်္လာ နေ့က Apple က iOS4ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ latest mobile operation system ကို ပြုလုပ်ပြီး ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
Apple ရဲ့ iOS4ကို June 21 မှာ customer တွေစတင်အသုံးပြုနိုင်တော့မှာပါ။ အဲဒီ OS မှာ အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ multitasking feature ကိုရနိုင်ပါတော့မယ်။ အဲဒီ feature ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သီချင်းနားထောင်နေရင်း e-mail တွေကိုစစ်ဆေးနိုင်သလို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို တစ်ချိန်တည်းမှာ လက်ခံဖြေကြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အခြား feature အနေနဲ့ e-mail အားလုံးကို လက်ခံနိုင်တဲ့ inbox နောက် ကိုယ့် app တွေစုစည်းထားနိုင်တဲ့ folder တွေအပြင် Apple ရဲ့ digital bookstore ကို လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်နဲ့တော့ iOS4က Android ထက် သာလွန်သွားပြီလို့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
အောက်မှာ OS နှစ်ခုရဲ့ latest version မှာပါဝင်တဲ့ feature တွေကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
to developers now. iPhone 3G S, iPhone 3G and iPod Touch consumers get
a free upgrade on June 21. iPhone4available on June 24. Available to developers now. Available to some Nexus One users now. Updates to other devices “coming soon.”
ဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့် တခု ကောမန့် မရတာကို ၀မ်းနည်းတယ်ဗျာ …
ခုဆို အိုင်အိုအက်စ်-အန်းဒရွက်-၀င်းဒိုးဖုန်း …၃ကောင်ပြေးတဲ့
ကျနော်ရေးဖြစ်ရင်လည်း အစ်ကို့ဆီ ခေါင်းလောင်းတီးပါ့မယ်ဗျာ…